ए डिभिजन लिगः छैटौं चरणका खेल मंगलबारबाट, अंक तालिकामा कस्को स्थिति कस्तो ? | Sagarmatha TV
ए डिभिजन लिगः छैटौं चरणका खेल मंगलबारबाट, अंक तालिकामा कस्को स्थिति कस्तो ?
मनाङ पहिलो स्थानमा, आर्मी पछ्याउँदै
काठमाडाैं । काठमाडौंमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत पाँचौ चरणका खेल सकिंदासम्म अपराजित रहँदै मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । पाँच खेलमा जित हात पार्दै मनाङ १५ अंक सहित पहिलो स्थानमा छ भने आर्मी चार खेलमा जित र एक खेलमा बराबरी खेल्दै १३ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहको मनाङलाई पछ्याइरहेको छ ।
पाँचौ चरणमा आइपुग्दा हिमालयन शेर्पाको अपराजित यात्रामा पनि पूर्ण विराम लागेको छ । शेर्पा आर्मीसँग पराजित भएको हो । तालिकामा थ्री स्टार क्लब १२ अंक सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
थ्री स्टार मनाङसँग पराजित हुँदा बाँकी चारवटै खेल जित्न सफल भएको छ । यसैगरी संकटा क्लबले पनि पाँच खेल मध्य चार खेल जित्दै १२ अंक बनाएको छ । थ्री स्टारभन्दा गोल अन्तरका आधारमा पछि पर्दै चौथो स्थानमा रहँदै पाचौं चरणको लिग सकाएको छ ।
विभागीय क्लब नेपाल पुलिस र हिमालयन शेर्पाको समान १० अंक भए पनि गोल अन्तरका आधारमा पुलिस पाँचौ र शेर्पा छैटौं स्थानमा रहेका छन् । पाँच मध्य २ खेल जितेर ६ अंक जोडेको सरस्वती ७ औं स्थानमा रहेको छ । आठ देखि ११औं स्थानमा रहने टिमले लिग तालिकामा ४ अंक जोडेका छन् ।
आठौ स्थानमा रहेको च्यासले एक खेलम बराबरी र एक खेल जित्दै ४ अंक पुर्याएको हो । यसैगरी सोही नतिजाका साथ फ्रेन्ड्स नबौं, जावलाखेल दशौं र एपीएफ ११औं स्थानमा छ । ब्रिगेड ब्वाईजले ३ अंक जोड्दै १२ औं स्थानमा रहँदा मछिन्द्रले २ तथा एनआरटीले एक अंक मात्रै जोडेको छ । एनआरटी तालिकाको पुछारमा रहेको छ । आइतबारको खेलसँगै ए डिभिजन लिगको पाँचौ चरण सकिएको हो । अब छैटौं चरणको खेल मंगलबारदेखि हुनेछन् । मंगलबार हुने पहिलो खेलमा एपीएफ र एनआरटी तथा पुलिस र संकटा भिड्ने छन् ।